ဗမာစာကို ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဗမာစာကို ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ။
Posted by asiamasters on Oct 24, 2010 in News | 24 comments
ရတနာပုံဂေဖက်ရဲ့ facebook မှာ “ဗမာစာသည်တို့စာ ဗမာစကားသည်တို့စကား“ လို့ရေးထားတာကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် အတော်ပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဗမာစကားမရှိတော့ရင် ဗမာလူမျိုးဆိုတာ ဘယ်ကျန်ပါတော့မလဲ။ ဒါကြောင့် ဗမာစကားဟာအတော်အရေးကြီးပါတယ်။ လူသားတွေအသုံးပြုတဲ့ ဘာသာစကားတွေဟာ အသုံးပြု သူရဲ့ အဆင့်အတန်းကိုဖြစ်စေသလို၊ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုရဲ့ အဆင့်အတန်းနဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေကိုပါပြပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကမ္ဘပေါ်မှာ ဘာသာစကားအမျိုးအစားပေါင်း ၆၀၀၀ လောက်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့နေရာမှာ အများဆုံးအသုံးပြုတာက တရုတ်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီးတော့ နိုင်ငံအများဆုံးအသုံးပြုတာက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။္ဘ ဗမာဘာသာစကားဟာ Parli ဘာသာစကားမှာ အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Parli ဘာသာစကားဟာ Dead Language ဖြစ်တော့ ဗမာဘာသာစကားဟာလည်း မသေ့တသေပါပဲ။ ဗမာဘာသာစကားမှာ ကြွယ်ဝတဲ့ ဝေါဟာရတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် Borrow Word တွေနဲ့အသုံးမပြုပဲ ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အတွက် အဓိပါယ်များ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေတာတွေတွေ့ရပါတယ်။
တခါတရံမှာ ကျွန်တော်တို့ အသေးအဖွဲလို့သဘောထားတဲ့ အကြောင်းကိစ္စတွေဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှုလွဲတာတွေ၊ အတွေးတိမ်သွားတာတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဥပမာ တစ်ခုပြောရရင် “စီးပွားရေး”ဆိုတဲ့စကားလုံးပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်တော်တို့က သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေတွေ့ရင် “ဟေ့သူငယ်ချင်း၊ စီးပွားရေးကောင်းလား၊ စီးပွားရေးအဆင်ပြေရဲ့လားလို့ မေးလေ့မေးထရှိပါတယ်။ Institute of Economics ကိုတော့ “စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်” လို့တောင်နာမည်ပေးလိုက်သေးတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးကမပါမဖြစ်ပဲ။ မေးလေ့မေးထရှိတာက “မင်းဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်သလဲ” အစရှိသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောရရင် Business ကိုသုံးလိုက် Economy အဖြစ်ရောနေတာတွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာလူမျိုးများနိမ့်ပါးသွားရခြင်းမှာ ဒီစီးပွားရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကပါနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Business ဆိုရင် Business, Economy ဆိုရင် Economy ကွဲကွဲပြားပြားသုံးသင့်ပါတယ်။ Business ရဲ့ အင်္ဂလိပ်အဓိပါယ်ကကျယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချုပ်သဘောပြောရရင် Business is buying and selling of products or services. လို့ အဓိပါယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ရောင်းခြင်းနဲ့ ၀ယ်ခြင်းတွေပါပဲ။ Economy ရဲ့ မူလအဓိပါယ်ကြတော့ မူလဈေးထက်ချိုသာတာကိုခေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်လက်မှတ် ၀ယ်ရင် Economy Class ကို ၀ယ်လေ့ရှိပါတယ်။ Budget Class လို့လဲခေါ်ပါတယ်။ နောက်အဓိပါယ်တစ်မျိုးက Cost effective လို့ခေါ်ပါတယ်။ တွက်ချေကိုက်တာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Economics လို့ဆိုရင် တော့ The study of the society how they allocate scarce resources effectively and efficient လို့ပြန်ပါတယ်။ အဓိပါယ်ကတော့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုဟာ ရှားပါတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကို ဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့ စွမ်းရည်ပြည့်ပြည့် အသုံးချတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ စီးပွားရေးဆိုတဲ့ အဓိပါယ်ကိုကြည့်ရအောင်။ စီးဆိုတာက Flow ဖြစ်ပါတယ်။ ပွားဆိုတာက Multiply ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးဆိုတာက Affairs ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ပွားသထက်ပွားအောင်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်လာတယ်။ ပွားချင်သလိုပွား၊ ပွားရင် အမှန်ပဲဆိုတာမျိုးတွေရှိလာတယ်။ ဒါကြောင့် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းတွေ၊ တွက်ချေကိုက်အောင်စဉ်းစားတာတွေထက်စာရင်၊ ငါပွားရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ unethical and irresponsible လူသားတွေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် Business ဆိုရင် Business လို့ပြောတာကောင်းပြီး၊ Economy ဆိုရင် Economy လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ စီးပွားရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကို မသုံးသင့်တော့ဘူး။
နိုင်ငံတကာက ဘာသာစကား အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာဆိုရင် အဘိဓါန်တွေက အမြဲ အသစ်အသစ် Edition တွေနဲ့ ထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓါန်မှာကောင်းတဲ့ အဘိဓါန်ရှိပါတယ်။ ဒါက မြန်မာစာအဖွဲ့က ထုတ်ဝေတဲ့ အဘိဓါန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုသေးတယ်။ မပြည့်စုံသေးဘူး။ ကျွန်တော်တိုက တစ်ချို့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကိုတော့ Borrow Word အနေနဲ့ပဲသုံးနိုင်တော့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားကို ပြောင်းလဲကြရတော့မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် အဓိပါယ်တွေ တိမ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ ပိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေပေါ်လာတော့မယ်။ နောက်တစ်ပုဒ်မှာ Education, Learning နဲ့ ပညာရေးဆိုတာကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်။
ဟုတ်တယ် မြန်မာစာကို ဘယ်လိုပြင်မှအဆင်ပြေမလည်းမသိဘူးနော် …… မြန်မာစာမှာ မွေးစားစကားလုံးတွေများနေတာ ခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းတိုင်းလိုလိုမှာ မြန်မာမူရင်းမရှိပဲ မွေးစားတဲ့စလုံးတွေကိုပဲ အသုံးပြုနေရတာ ….. နောက်ပြီး အခုခေတ် ချက်တင်မှာသုံးနေတဲ့ မြန်းကလိ …. မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြန်မာစာကိုတန်ဖိုးထားပြီး မြန်မာလိုပဲရိုက်သင့်တယ်
ဗမာစာကို ပြင်မယ်ဆိုရင် ငယ်စဉ်တောင်ကြေး ကလေးဘ၀ကတည်း ဖတ်လာတဲ့ စာတွေ ဖတ်တတ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး..
ဗမာ အသုံးအနှုန်း ဆိုရင်တော့ ပြင်သင့်တဲ့ စကားလုံးတွေ မြောက်မြားစွာ ရှိပါတယ်။ အသုံးအနှုန်းလွဲလို့.. အတွေးလွဲသွားတာတွေ အများကြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေ ရှိပါတယ်။
မွေးစား တဲ့စကားလုံးဆိုတာ လူမျိုးတိုင်း စာပေတိုင်းမှာရှိပါတယ်။
သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး ပြောတဲ့ စကား တချို့ ကောက်နုတ်ရေးသားလိုက်တယ်။
လူတွေက အ၀ီဇိရေ တဲ့.. အ၀ီဇိသွားမဲ့ လူတွေ ဆိုတော့ အ၀ီဇိရေ သောက်သုံးနေကြပေါ့.. ကိုယ်တော်ကတော့ မြေအောက်ရေဘဲ သုံးတယ်။ ပြစ်ညက်သွားရာ ဓါတ်သတ်ပါတယ်တဲ့..
ဟေတုပစ္စယော.. ဘယ်လို အသံထွက်ထဲ.. ပြစ်စရော.. အဲဒီတော့ ပစ်ကုန်ရော.. အမှန်က.. ပစ်(pit) စယော.. အဲဒီလို ထွက်ရမှာ အသံနေအသံထားတွေ မှားနေတယ်..
ဒီကောင် မိုက်တယ်ကွာ.. လူတော်တွေ.. မိုက်တယ်ကို ဘာသာပြန်.. လူဆိုး.. အမှန်တော့.. ဒီကောင်တော်တယ်.. ထွင်လုံးတွေနဲ့.. ရှုပ်ရှက်ခက်ပြီး လူတွေလည်း မိုက်တယ် မိုက်တယ်နဲ့ မိုက်ကုန်ကြတယ်
ဟုတ်တယ်ဗျို့ပြင်လွန်ရင်ဖင်ချွန်ဆိုလားနော ဥပမာ
ကွန်ပြူတာ ဆိုတာ အသစ်ပေါ်လာရင် ကွန်ပြူတာလို့ လိုက်ခေါ်လိုက်ရုံဘဲဗျ
သို့ မဟုတ်ကြပါလျှင်တော့ လေးပေါက် လို့ ခေါ်ရမယ့်အစား
ဦးရီးတော်ပေါက်ဆိုရင် ရော ဘယ့်နှယ်ရှိစ
ဇာဂနာ ပြောတာကို အမှတ်ရမိပါရဲ့မားသားဘုတ်ကို မြန်မာမှုပြုလိုက်တာ
အမေအပြားကြီးလို့အဖြေရတယ်ဆိုဘဲ မချောင်ဘူးဗျို့ 
အခုမှ တယောက်စီ ကွန်မန့်ကို ဖတ်ပြီး သတိတခုရတယ်.. ပိုစ်ပိုင်ရှင်က စီးပွားရေး ဘက်မှာ စာသင်တဲ့ သူဆိုတော့ သူစီးပွားရေး အမြင်နဲ့ ပြောသွားတာ.. ဒီမှာ ဖတ်ပြီး မန်းပေးတဲ့ လူတွေက တယောက် တလိုင်းဖြစ်နေတာ့.. ပြင်ဆင်ဖို့ သင့်မသင့် အများကြီး အတွေးတွေ ထွက်လာတယ်… အားလုံးကတော့ ကိုယ်သန်ရာ သန်ရာဘဲ သိကြတာဘဲ.. ဘက်စုံ အဖက်ဖက် က နားလည် တက်ကျွမ်းဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
Borrow world မသုံးခဲ့တဲ့ Own tune တော်ကီလေးတွေ
နောက်မွေးလာမည့်ခလေးတွေတော့ ဒီ Own tune စကားတွေ နားလည်ချင်မှ နားလည်တော့မယ်ထင်တယ်
အမှန်တော့ မြန်မာစာကို ပြင်ရမှာတဲ့ မြန်မာစာကို သေချာသိဖို့ လူတိုင်း လိုအပ်ပါတယ်။ သဘောကတော့ ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း အထီးလား အမလားမသိ ဆိုသလိုပေါ့။ ဗမာစာမှာက အဓိပ္ပာယ်တွေ အမျိုးမျိုးခွဲခြားနေတော့ ဘယ်လိုစာဟာ ဘာဆိုတာကို အရင်ဆုံးသိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမှန်ကန်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်ဗမာစာကို ဗမာတောင် မသိနားမလည်ရင် ဒီပြင်တိုင်းရင်းသားများအပြင် နိုင်ငံခြားသားတွေကရော ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာ …. အရင်ဆုံး လေ့လာသုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မာစတာကြီးရေ ပြင်သင့်တယ်ဆိုလဲ ဥပမာလေးနဲ့
ဘယ်လိုပြင်သင့်တယ် တင်ပြရင် ပိုဆွေးနွေးလို့ကောင်းမှာပါ
အထက်တန်းတွေကို သင်တဲ့သူတွေ သိပါတယ်။ ဖလှယ်စရာဝေါဟာရတွေ ခေါင်းပါးမှုကိုပေါ့။
ရင်ကိုထိတဲ့စကားဆိုတာ ရင်ထဲကပဲ လာတာပါ။
ပညာရေးဆိုတာ လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ကြွယ်ဝမှုအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အတွက်
(စီးပွားရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကို မသုံးသင့်တော့ဘူး။)လို့ရေးပြထားတဲ့ အဆိုကိုလက်ခံပြီးတော့ ဒီစကားလုံးကို မသုံးဘဲပြောင်းမယ်ဗျာ။
သူကလူတွေကို ကောင်းအောင် ဆုတောင်းပေးတဲ့သီချင်းလေး။ “အောင်ပါစေ” တဲ့။
” စီးပွားရေးနဲ့ ကြီးပွားရေး သမီးရီးစားအရေးလဲအောင်ပါစေ”တဲ့။
ကဲမြန်မာစာ ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့တိုင်ပင်လို့ အဲဒီသီချင်းထဲက( စီးပွားရေး)ဆိုတဲ့စာလုံးနေရာမှာ သူဆိုလိုချင်တာလဲမပျက်အောင်
လိုက်ဖက်တဲ့စာလုံးလေးကို စဉ်းစားပြီး ကောင်းအောင်ပြောင်းလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။
ကျနော်ကတော့ တကယ်မသိလို့ မြန်မာစာကျွမ်းကျင်သူများရှိရင် ပြောင်းပေးကြပါအုံး။
ခက်တာက တကယ်တတ် တကယ်လုပ်နိုင်သူများ နေရာပျောက်နေခြင်းပါပဲ။ အရင်တုန်းက မြန်မာစာအဖွဲ့မှာ တတ်သိ နားလည်တဲ့ ဆရာကြီး ဆရာမကြီးများရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က သူတို့ကို စာရေးကြီးများ လောက်သာ သဘောထားတော့ တော်တတ်သူတွေ ပြုတ်၊ထွက်၊ဘေးရောက်ပြီး အခြေအနေကြည့် မီးစဉ်ကြည့်သူများလောက်သာ ကျန်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို အထူးသဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ကိုယ်ဖိရင်ဖိလုပ်သူများသာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြတာပါ။ သူတို့ကလည်း ပေးသမျှယူ ကျွေးသမျှစားတဲ့ နဖားကြိုှးဆွဲခံနွားတွေ မဟုတ်တော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါကိုမြင်လို့ စစ်တပ်က ကိုယ်ပိုင်ပညာရှင်တွေ မွေးထုတ်တော့ ပျက်ပါတယ်။ ပျက်လက်စနဲ့ပျက်နေလို့ သာမသိသာတာပါ။ ပျက်ခါစတုန်းကတော့ သိသူတတ်သူတွေက အလန့်တကြားနဲ့ ဝေဖန်လို့အကန်ခံရတယ်။ အခုလည်း ပြင်မယ်ဆိုရင် ထပ်ပြီး အကန်ခံကြရအုံးမှာပါ။
ကိုကြောင်ကြီးပြောတာဟုတ်တယ် လက်ရှိစစ်အစိုးရကပိုတောင်ဆိုးသေး တကယ်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေနေရာမရှိဖြစ်နေတာ တကယ်က မြန်မာဘာသာအဆင့်အတော်မြင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် ကီဘုတ်မှာမြန်မာကိုအစားထိုးလို့ရတယ် ဂဏန်းအက္ခရာဆိုလဲမြန်မာတွေမှာကိုယ်ပိုင်စာလုံးနဲ့ဂုဏ်ယူဘို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ် တရုတ်ဘာသာဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာတရုတ်လူဦးရေများလို့သာအသုံးများနေကြတာ မြန်မာဆိုဗျည်း၃၁လုံးရှိတယ် တရုတ်ဘာသာမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ကီဘုတ်မှာတရုတ်စာလုံးရယ်လို့မရှိဘူး တရုတ်စာရေးချင်ယင်အင်္ဂလိပ်လိုစာလုံးပေါင်းပြီးမှတရုတ်စာပြောင်းယူရတယ် ဒါကလဲအတန်းကျောင်းကြီးကြီးတက်ထားတဲ့သူမှကီဘုတ်မှာရိုက်တတ်တာ သာမန်သူတွေကအုပ်စုခွဲထားတဲ့တရုတ်စာလုံးတွေကိုကီဘုတ်နဲ့မောက်နဲ့တွဲရှာရတယ် ဂဏန်းအက္ခရာကျတော့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာယူသုံးရတယ် ထိုင်းနိုင်ငံလဲအင်္ဂလိပ်အက္ခရာဘဲယူရတယ် ဒါကြောင့်မြန်မာဘာသာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေနည်းလို့သာလူသုံးနည်းတာသာဖြစ်တယ် ဘာသာအဆင့်အတန်းအင်မတန်မှမြင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်……….
စီပွားရေးနဲ့ကြီပွားရေး ဆိုတာကသီချင်းအဖြစ်နဲ့ကာရံမိအောင်ဆိုလို့ကောင်းအောင်ဆိုတာဖြစ်လို့မပြောလိုပါဘူး ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ယင်းပြောတဲ့အခါစီပွားရေးအဆင်ပြေလါးလို့ပြောမဲ့အစား(အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေလါး)လို့ ပြောလို့ရပါတယ်…..
နိုင်ငံ၇ဲ့အ၇င်းအမြစ်တွေကိုမောင်ပိုင်သိမ်းတဲ့ကိစ္စတွေထဲ့မှာ၊ ဘာသာ၊ယဉ်ကျေးမှုနဲ့စာပေကိုမောင်ပိုင်သိမ်းတာအဆိုးဆုံးပါဘဲ။ “မော်တော်ကား”ဆိုတဲ့စကားကလူသုံးတွင်ကျယ်ယုံမကငြင်းစ၇ာမလိုတဲ့ဝေါဟာ၇ဖြစ်နေပြီမို့ပြင်သင့်တဲ့ဝေါဟာ၇လို့မထင် ပေါင်။ ထိုနည်းတူတခြားဘာသာကနွယ်ထားတဲ့မြန်မာဝေါဟာ၇တွေမြောက်မြားစွာ၇ှိပါတယ်။ ၇ှိသင့်တဲ့နေ၇ာမှာ၇ှိကြပါစေ။ အဆိုးဆုံးကတော့ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ဝေါဟာ၇တွေခေတ်စားလာတာအတော်ဆိုးတာဘဲ။
ဘာသာစကားဟာတကယ်တော့လူချင်းဆက်သွယ်တဲ့ကိ၇ိယာတခုပါ။ လူလူချင်းဆက်သွယ်ကြ၇ာမှာအဆေင်ပြေချောမွေ့ဘို့သမိုင်းဦးကတည်းက၇ှိခဲ့တာဆိုတာကိုမမေ့ကြဘို့လိုပါတယ်။ ပြောင်းသင့်တာတော့ပြောင်း၇မှာပေါ့။
ဥပမာ – REFUGEE ကို “ဒုက္ခသည်”လို့ကင်ပွန်းတတ်တာ…။ ဒုက္ခဆိုကတည်းကသွားပါလေေ၇ာ…။ လူတယောက်၇ဲ့ဘ၀ကိုတသက်လုံးအ၇ိပ်လိုလိုက်ဒုက္ခပေးနေမဲ့ဝေါဟာ၇မျိုးဖြစ်မနေဘူးလား။ “ပြောင်းခိုသူ”ဆိုတဲ့စကားကပိုသင့်တဲ့ဝေါဟာ၇မျိုး…။ (ဝေါဟာ၇ကိုတီထွင်ပေးတဲ့ မန္တလေးဂေဇက် ကိုကျေးဇူးပါဘဲ)
ဟုတ်ပါတယ်…မြန်မာစာကော်မီ၇ှင်တဖြစ်လဲမြန်မာစာအဖွဲ့ဟာသေနေတာကြာပါပြီ။ စနစ်၇ဲ့လောင်း၇ိပ်ဒါဏ်ကိုခါးစီးခံနေ၇တဲ့ဝမ်းနဲစ၇ာအဖြစ်တွေပါ။ မြန်မာစာပေပညာ၇ှင်တွေဆင်း၇ဲချို့တဲ့စွာဘ၀ကိုအဆုံးသတ်ကြ၇တာတွေပိုများလာသလိုပိုလို့တောင်နှမြောစ၇ာကောင်းနေပါပေါ့လား…။
ဆွေးနွေးချက်တွေကို .. ဘိုလိုလန်းစင်ရဲ့ဆောင်းပါးလေးနဲ့အားဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
အောက်ကလင့်မှာ အပြည့်အစုံဖတ်နိုင်ပါတယ်..။ မဖတ်နိုင်သူတွေအတွက်.. လိုရင်းအပိုဒ်၃သာဖြတ်တင်ပေးလိုက်ပါကြောင်း..။
ဘိုဘိုလန်းစင် Saturday, April 10, 2010 ဆောင်းပါး
ဒီနေ၇ာမှာကျွန်တော်တခုလောက်ပြောချင်တယ်။ economics,economy,business ဆိုတဲ.စကားလုးံတခုစီကို ကိုယ်စားပြုဖို. လုံလောက်တဲ.ဝေါဟာ၇မ၇ှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ.အထက်ကပြောခဲ.သလို ” ။ ဆိုလိုတာကတော့ ပွားသထက်ပွားအောင်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်လာတယ်။ ပွားချင်သလိုပွား၊ ပွားရင် အမှန်ပဲဆိုတာမျိုးတွေရှိလာတယ်။ ဒါကြောင့် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းတွေ၊ တွက်ချေကိုက်အောင်စဉ်းစားတာတွေထက်စာရင်၊ ငါပွားရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ unethical and irresponsible လူသားတွေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ ” ဆိုတဲ.အဓိပါယ်မျိုးလုံးဝမဆောင်ပါဘူး။ မြန်မာစကားမှာ စေတနာ ဒေါသဆိုတဲ. စိတ်ခံစားမူ.ပါပါတယ်။ ဒီ စီးပွားေ၇းဆိုတဲ.စကါးလုံးမှာ ကောင်း၇ာကောင်းကြောင်းဖြစ်သော ကောင်းတာကိုလုပ်သော ဆိုတဲ.စေတနာပါပြီးသားပါ။ အဲ.ဒီတော. .. သူငယ်ချင်း မင်.စီးပွားေ၇းဘယ်လိုလည်း ..စီးပွားေ၇းကောင်း၇ဲ.လား ဆိုတာ ပြည်.စုံကောင်းမွန်တဲ.စကားလုံးလို.ထင်ပါတယ်။ အထက်ကပြောတဲ.စကါးလုံးတွေအတွက်တော.တိုိုက်၇ိုက်ယူသုံးတအကောင်ဆုံးထင်ပါတယ်။
အားသာချက်နဲ့ အားနဲချက်ကတော့ အမြဲဒွန်တွဲနေမှာပါပဲ … ကျွန်မက တရုတ်ဘာသာကို တရုတ်ပြည်မှာလေ့လာခဲ့ရင်းကနေ တရုတ်ဘာသာရဲ့စိတ်ပျက်စရာကောင်းပုံတွေတွေ့ရတယ် .. သူတို့လူမျိုးက နံမည်အားလုံးကို တရုတ်မှုပြုထားခဲ့ကြတယ် … အဲဒီမှာ ဒုက္ခရောက်တာပဲ .. ကျွန်မတို့ဗမာတွေကျတော့ မွေးစားထားတော့ ပိုလွယ်နေတာပေါ့ … အောက်စီဂျင်လို့ပြောလိုက်ရင် ဘာသာစကားတော်တော်များများက နားလည်ပေမယ့် တရုတ်ကနားမလည်ဘူး .. ယူနစ်တွေ (မီတာ ၀ပ် စသဖြင့်) သူတို့အကုန်တရုတ်မှုပြုထားတော့ ကျွန်မတို့စာသင်တယ့်သူတွေ စာလုံးလိုက်မှတ်ရတာနဲ့တင် သူတို့စာကို စိတ်ပျက်လာပါတယ်။ နိုင်ငံနံမည်တွေကိုလဲ အကုန်တရုတ်မှုပြုပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်သရန့် လို့ခေါ်သလိုပေါ့။ အဲဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ သူတို့ဘာသာမှာ အသံအားလုံးကိုထွက်နိုင်တယ့် ဗျည်း အက္ခရာအစုံမပါတယ့် ပြသနာပါပဲ။ ကျွန်မတို့ မြန်မာစာလုံးတွေက အသံထွက်အားလုံးနီးပါးကို ထွက်နိုင်တော့ အဲဒီအပိုင်းမှာ ဗမစာက အားသာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာစာတီထွင်ခဲ့တယ့်သူတွေရဲ့ အမြှောင်အမြင်ကြီးမှုကိုလဲ လေးစားဂုဏ်ယူလို့ မဆုံးပါဘူး …
ှဗမာစာလုံးတွေကို စထွင်ခဲ့တာ ကျုပ်မဟာဘိုးအေကြီးလေ။ အဲဒီအချိန်တုန်က ကိုအောင်ပုရဲ့ ဘိုးအေကြီးက ထန်းတောထဲမှာ တခွက်တဖလားချလို့ကောင်းတုန်း။ ကိုပုရေ ခင်ဗျားတော့ ကျန်ခဲ့ပြီဗျ။
ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ ၀ိုင်းပြီး ကွန်မန့်တွေ ပေးနေကြတာ.. ပိုစ်တင်တဲ့ သူဆီက အသံ လေးဘာလေး မကြားရသေးဘူး.. အတွေးတွေ ၀ိုင်းဖလှယ်ပေးနေကြတဲ့ မန်ဘာတွေကို တုံ့ပြန်စကား တခုခုတော့ ပြောသင့်တယ်ထင်တယ်။ အားလုံးက အတွေးကိုယ်စီနဲ့ ၀ိုင်းရေးပေးထားကြတာ။
အလို အန်တီဆူး ဒီနေ့ တယ်နောက်ကျလှချည်လား။ ကျုပ်က အန်တီဆူး အင်တာနက် လစဉ်ကြေး မဆောင်လို့ လိုင်းအဖြတ်ခံရပြီ ထင်နေတာ။ ကိုkaiကိုတောင် ပွိုင့်ဖိုးကြိုထုတ်ခိုင်းတော့မလို့။
နောက်ကျဆို.. တမနက်လုံး နက်နက်က သုံးမရ ဖြစ်နေလို့..
Education, Learning နဲ့ ပညာရေးဆိုတာကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း ဆက်ပြီးဆွေးနွေးစေလိုတယ်ဗျာ
ဒီနေရာလေးကတော့ ခေါင်းငြိမ့်လက်ညှိုးထောင်နေရာမဟုတ်လေတော့ ရန်ဖြစ်တယ်လို့ တော့ သဘောမထားနဲ့ ဗျို့ 
အမြင်ချင်းဖလှယ်ပြီး သင့်ရာကို ဆောင်ရွက်ရုံဘဲရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းဆွေးနွေးကြပါဗျာ။ ကျုပ်ကတော့ ခင်ဗျားတို့ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာတွေကို အလွန်သဘောကြမိပါရဲ့ 
ဒါပေမယ့် အဂတိကင်းကင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုကြဘို့ ရာတော့ လိုမယ်ထင်တယ်နော်။